Nodimandry ny mogul media sy mpanao asa soa tanzanianina
Home » Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany » Nodimandry ny mogul media sy mpanao asa soa tanzanianina
Nodimandry ny alarobia alina tany Dubai, Emira Arabo Mitambatra, ny alarobia alina any Dubai, Emira Arabo Mitambatra.
75 taona i Mengi no mpamatsy vola eo an-toerana amin'ny indostrian'ny haino aman-jery, manana sy mitantana fahitalavitra sy radio roa lehibe indrindra, koa ny gazety Guardian sy Nipashe isan'andro eo ambanin'ny elo an'ny IPP Media.
Tamin'ny alàlan'ny IPP Media, Andriamatoa Mengi dia nanangana ny empira fampitam-baovao, izay manompo an'i Tanzania sy ny faritra atsinanan'i Afrika Atsinanana. Ny fanjakan'ny haino aman-jery azy dia manana ITV, TV Afrika Atsinanana, TV Capital, Radio One, Radio Afrika Atsinanana ary Capital FM, izay miasa ao an-drenivohitra Tanzania any Dar es Salaam, manompo an'i Tanzania sy Afrika Atsinanana.
Ankoatry ny haino aman-jery, ny IPP dia liana amin'ny fitaterana tavoahangy Coca-Cola, fitrandrahana harena an-kibon'ny tany ary ho an'ny mpanjifa.
Ny tatitra ny alakamisy maraina dia nanamafy fa nodimandry Andriamatoa Mengi, filohan'ny Confederation of Tanzania Industries, IPP Gold Ltd. Izy no mpanoratra ny boky mitondra ny lohateny hoe 'I Can, I Must, I Will,' ary iray amin'ireo mpanankarena indrindra teto Tanzania.
Teraka tamin'ny 1944 tao amin'ny faritr'i Kilimanjaro any avaratry Tanzania izy ary talen'ny Fikambanan'ny Tompon'ny Media ao Tanzania.
Ny fahafatesany dia tonga dimy volana taorian'ny nanambarany fa fampiasam-bola amin'ny IPP Automobile, fivarotana fivoriambe fiara ary ny sehatry ny telefaona finday. Ny orinasa $ 10 tapitrisa dia fiaraha-miombon'antoka IPP Automobile Company Ltd sy Youngsan Glonet Corporation.
Forbes dia nitatitra fa ny IPP Automobile dia efa nanomboka nanafatra ampahany ho an'ny fivorian'ny fiara Hyundai, Kia ary Daewoo.
Nisongadina ingahy Andriamatoa Mengi tamin'ny fiandohan'ny taona 1990 raha nanangana orinasa mpamokatra entam-barotra ho an'ny mpanjifa izy ary iray amin'ireo fahitalavitra voalohany tany Tanzania.
Ilay lehilahy niatrika ny tontolon'ny haino aman-jery henjana any Tanzania hanangana fanjakana am-pirinty sy nalefa dia fantatra fa manome hery ireo vondrona marefo ao Tanzania.
Andriamatoa Mengi dia fantatra fa notoheriny ny politikan'ny fahantrana tanzania hananganana orinasa vaventy izay mampiasa olona an'arivony ankehitriny.
Niova tsikelikely ny firenena tamin'ny sosialisma, izay nitokana ho an'ny fanjakana sy ny antokon'ny fitondrana ny fananany haino aman-jery, nitondra fomba fijery vaovao momba ny vaovao sy fialamboly manerantany ny mpampahalala azy, hoy ny BBC.
Rehefa nanangona harena be dia be izy, dia lasa mpanao asa soa, anisan'izany ny fandoavana ny fitsaboana zaza Tanzaniana an-jatony mararin'ny fony.